iMac 2021 oo ah 1.299 euro, AirPods Max 509 euro iyo dalabyo kale oo laga helo Amazon ee alaabada Apple | Wararka IPhone
Hal usbuuc oo kale ayaan kugu wargalin doonaa heshiisyada ugu wanaagsan ee alaabada Apple kuwaas oo laga heli karo Amazon. Markay soo dhawaato taariikhda bandhigga ee heerka cusub ee iPhone 13, waxay umuuqataa in Apple uusan danaynayn in laga takhaluso kaydka la heli karo iyo, mar labaad, ma aanan helin wax dalab ah oo aan ku iftiiminno.
Waad ku mahadsan tahay heshiiska u dhexeeya Apple iyo Amazon inay si toos ah u iibiyaan alaabtooda iyada oo loo marayo madal-e-commerce-ka dambe, iibso alaabta Apple qiimo dhimis xiiso leh Iyada oo leh dammaanad la mid ah tan had iyo jeer, waa run oo mararka qaarkood waxaan helnaa dalabyo aanan ka maqnaan karin.
Dhammaan dalabyada aan kugu tusinno maqaalkan waxaa la heli karaa waqtiga daabacaadda. Waxay u badan tahay in maalmuhu sii socdaan, dalabyada mar dambe lama heli doono ama qiimahoodu wuu kordhayaa.
Amazon ayaa noo ogolaaneysa maalgelinta iibsashada alaabta oo dhan Waxaa laga heli karaa madalkeeda qiimihiisu yahay inta u dhaxaysa 75 iyo 3000 euro oo ku habboon qayb-dulsaar la'aan. Faahfaahinta maalgelinta ayaa laga heli karaa maqaal kasta.
1 iMac 2021 oo ah 1.299 euro
2 iPad Air 2020 laga bilaabo 529 euro
3 Qalabka iPad
3.1 Qalinkii 2aad ee Qalinkii Apple 126 euro
3.2 Jiirka Bluetooth ee iPad -ka 13 euro
4 3 bilood oo bilaash ah Amazon Music HD
5 Qalabka IPhone
5.1 Kiis maqaar oo ku habboon MagSafe oo loogu talagalay iPhone 12/13 Pro Max 97 euro
5.2 Apple MagSafe Double Charger ee 130 euro
5.3 Jiilka 2aad AirPods oo ah 105 euro
5.4 Jiilka 2aad AirPods oo leh kiiska lacag -bixinta wireless -ka ah 169 euro
5.5 AirPods Pro ilaa 175 euro
5.6 AirPods Max waa 509 euro
iMac 2021 oo ah 1.299 euro
Dib-u-habayntii muddada dheer la sugayey ee kala-sooca iMac ayaa timid horaantii sanadkan waxayna si weyn u samaysay. IMac 2021 wuxuu na siiyaa a 24-inji shaashad leh 4.5K xal oo ay weheliso processor -ka M1 ee Apple kaas oo sidoo kale laga heli karo xadka iPad Pro 2021.
Qaabkani wuxuu na siinayaa laba dekedood oo fidin ah, 8 GB oo RAM ah, 256 GB oo kayd ah, 8 cores CPU iyo 7 cores GPU. Qiimaha caadiga ah ee moodalka buluugga ah waa 1.449 euro, si kastaba ha ahaatee, waan awoodnaa ku iibso Amazon kaliya 1.299 euro, taas oo ka dhigan kaydinta 150 euro.
Iibso iMac 2021 oo leh 8 core CPU iyo 7 cores GPU oo ah 1.299 euro
Qaabka leh 8 cores CPU iyo 8 cores GPU, wuxuu leeyahay qiime caadi ah 1.669 euro, qiimahaas Waxaa lagu yareeyay 1.399 euro on Amazon oo leh isla RAM iyo kaydinta darawalnimada.
Iibso iMac 2021 oo leh 8 core CPU iyo 8 cores GPU oo ah 1.399 euro
iPad Air 2020 laga bilaabo 529 euro
Haddii jiilka cusub ee iPad ama iPad mini uusan buuxin baahiyahaaga, ikhtiyaarka ugu fiican maanta, haddii aad dhex marto baaxadda Pro waa iPad Air. 2020 iPad Air, oo leh shaashad 10,9-inji ah iyo 64GB oo kayd ah, ayaa laga heli karaa Amazon laga bilaabo 529 euro, taas oo ka dhigan qiimo -dhimis dhan 18% qiimaheedii caadiga ahaa.
Gudaha iPad Air 2020 waxaan ka helnaa processor -ka A14 Bionic, dareeraha faraha ayaa ku yaal dusha sare, badhanka guriga, wuxuu la jaan qaadayaa jiilka 2aad ee Apple Pencil wuxuuna ku leeyahay qiime joogto ah Dukaanka Apple ee 649 euro.
Pink iPad Air oo leh 64 GB oo kayd ah 529 euro. IPad Air Air oo leh 64 GB oo kayd ah 626 euro. Sky Blue iPad Air oo leh 64 GB oo kayd ah 611 euro.
Qalinkii 2aad ee Qalinkii Apple 126 euro
Qalinka Apple (2aad ...
Haddii aad rabto inaad ka faa'idaysato waxtarka badan ee uu Qalinka iPad -ku na siinayo iPad Air, waad heli kartaa 126 euro. Qiimaheeda caadiga ah ee Dukaanka Apple waa 135 euro, ma aha qiimo dhimis weyn, laakiin dhowr yuuro oo aan badbaadin karno marna ma badna.
Iibso Qalinkii 2aad ee Apple qalin 126 euro.
Jiirka Bluetooth ee iPad -ka 13 euro
Jiirka Bluetooth, Jiirka ...
Haddii aadan rabin inaad lacag badan ku bixiso jiirka bluetooth -ga oo sidoo kale ku shaqeeya baytariyada, Amazon waxaan ku haysannaa jiirka INPHIC, jiirka Waxay leedahay qiimo dhan 12,99 euroWaxay la shaqaysaa bluetooth sidoo kale waxaan ku isticmaali karnaa kombiyuutar maadaama ay ku jirto dareere si loogu xiro USB.
Ku iibso jiirka bluetooth 12,99 euro.
3 bilood oo bilaash ah Amazon Music HD
Bilowgii Nofeembar waxaan kugu wargelinnay dhiirrigelinta ay Amazon u fidiso dhammaan isticmaaleyaasha si ay ugu raaxaystaan ​​Amazon Music HD gabi ahaanba lacag la’aan, Qalabka muusigga ee qulqulka Apple ee qeexitaan sare leh.
Dalabkan ayaa kaliya la heli karaa Ilaa Sebtember 23 ilaa iyo inta aadan ka helin dalacsiin hore oo la mid ah. 3 bilood ka dib, qiimuhu waa 9,99 euro, oo la mid ah Apple Music. Haddii aad rabto inaad qandaraas ku siiso adeeggan iyo ka -noqoshada ka -hor intaysan bilaabin muddada lacag -bixintu, waad ku dhex mari kartaa xidhiidhkan.
Kiis maqaar oo ku habboon MagSafe oo loogu talagalay iPhone 12/13 Pro Max 97 euro
Haddii aad ka daashay qaadista iPhone -kaaga oo kaliya ilaalinta dhabarka oo aad jeceshahay inaad ku raaxaysato qalabka dhismaha ee Apple adeegsato adigoon halis ugu jirin inaad hoos u dhigto, Apple wuxuu na siiyaa kiiska maqaar ee muhiimka ah, dabool sharafeedka u eg (si aan isku fahanno) taas oo noo oggolaanaysa inaan qaadno iPhone 12/13 Pro Max oo leh nabadgelyo iyo ilaalin guud.
Es la jaanqaadi kara farsamada MgSafe, markaa uma baahnin inaan ka saarno kiiska si aan lacag uga qaadno. Intaa waxaa dheer, in lagu daro jeeb yar oo gudaha ah si loo kaydiyo kaarka deynta, dukumintiga aqoonsiga iyo sidoo kale suunka si had iyo jeer gacanta loogu hayo. Dhinaca hore, waxaan haysannaa meel bannaan oo aan ku arki karno waqtiga ama cidda na soo waceysa.
Qiimaha caadiga ah ee kiiskan maqaar ee isku dhafan waa 149 euro, laakiin waan awoodnaa ku soo qaado Amazon 97 euro.
Ku iibso kiish maqaar oo buuxa iPhone 12/13 Pro Max.
Daboolkan ayaa sidoo kale lagu heli karaa midab isku mid ah, guduud ah iPhone 12 iyo iPhone 12 Pro 92 euro.
Iibso maqaar buuxa iPhone 12 iyo kiiska iPhone 12 Pro.
Apple MagSafe Double Charger ee 130 euro
Haddii aad raadinayso xeedho safar oo loogu talagalay Apple Watch iyo iPhone 12, xalka ay Apple na siiso waa xeedho Double MagSafe, xeedho isku laaban si loo yareeyo booska ay ku jirto oo si fudud loogu raro. Qiimaha caadiga ah ee xeedho -kan, oo aan ku jirin adabtarada korontada, waa 149 euro, laakiin waxaan ka heli karnaa Amazon kaliya 130 euro.
Iibso Apple MagSafe Double Charger 130 euro.
Jiilka 2aad AirPods oo ah 105 euro
Apple AirPods oo kiis ...
AirPods wali waa mid ka mid ah badeecooyinka Apple ee ay na siiso qiimaha ugu fiican ee lacagta on amazon. Hal usbuuc oo dheeri ah, waxaan ka heli karnaa jiilka 2aad ee AirPods oo wata kiiska lacag -bixinta oo leh fiilo hillaac leh Qiimaha ugu hooseeya: 105 euro. Qiimaha caadiga ah ee taleefoonnada gacanta waa 179 euro.
Ku iibso AirPods jiilka 2aad kiiska hillaaca 105 euro.
Jiilka 2aad AirPods oo leh kiiska lacag -bixinta wireless -ka ah 169 euro
AirPods-kii labaad oo leh kiish lacag-la'aan ah, sidoo kale waxay gaareen qiimahoodii ugu hooseeyay abid Amazon waanan qaban karnaa kaliya 169 euro. Qiimaha caadiga ah ee Dukaanka Apple waa 229 euro.
Iibso AirPods jiilka 2aad oo leh kiis bilaa wireless ah 169 euro.
AirPods Pro ilaa 175 euro
Sida walaalahooda yaryar, AirPods Pro ayaa sidoo kale laga heli karaa Amazon, iyadoo 37% laga dhimay qiimahoodii caadiga ahaa ee 279 euro. Kaliya 175 euro, waxaan ka heli karnaa AirPods Pro Apple, oo naga badbaadisay 104 euro qiimaheedii caadiga ahaa ee Dukaanka Apple.
Iibso AirPods Pro 179 euro
AirPods Max waa 509 euro
Apple AirPods Cusub MAX -...
Apple AirPods Max ayaa sidoo kale laga heli karaa Amazon oo leh qiimo dhimis xiiso leh 19% qiimaha caadiga ah ee 629 euro. On Amazon waxaa laga heli karaa, midabada oo dhan 509 euro.
Inkastoo ay run tahay maahan qiimaheedii ugu yaraa ee taariikhiga ahaa, oo ahayd 499 euro laba toddobaad ka hor, sicir -dhimistu waa mid aad u xiiso badan iyo dalab aad ku seegi karto oo aadan gaarin tii hore.
Ku iibso AirPods Max midab kasta 509 euro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » iMac 2021 oo ah 1.299 euro, AirPods Max 509 euro iyo dalabyo kale oo ku saabsan Amazon ee alaabada Apple